Nzaghachi nsogbu gị na Social Media na-emebi Ọrụ gị | Martech Zone
Copyright onye ọrụ Flickr Craig Sunter
Enweghi ụkọ nke mgbasa ozi mmekọrịta n'oge ọdachi ndị mere na Boston n'oge na-adịbeghị anya. Ejiri ọdịnaya Facebook na Twitter gị juputara na ọdịnaya na-akọwa ihe omume nkeji na nkeji. N'ezie, ọtụtụ n'ime ya agaghị enwe isi ma ọ bụrụ na a gbara ya gburugburu.
Enweghikwa ụkọ nke ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ bụ ndị kpara àgwà kachasị mma n'oge nsogbu. Stacy Wescoe dere, sị: "Ekwesịrị m ịkwụsị onwe m wee sị, 'Mba, ndị mmadụ ekwesịghị ịhụ nke ahụ ugbu a,' ma hapụ Facebook peeji nke m maka ụbọchị niile." John Loomer dọrọ aka ná ntị na “Izi ozi mgbe nile pụrụ ịbụ ihe na-esighị n’obi n’oge ndị a.” Pauline Magnusson na-ekwu"Otú ọ dị, n'oge ọdachi, nke ahụ abụghị ihe ndị na-ege anyị ntị na-achọ."
Imirikiti mmadụ niile na-enye otu ndụmọdụ, ma n'ezie ha na-enyekwa otu aro dị ka nọmba otu ndepụta ha. Steven Shattuck na-akpọ ya "Ozugbo gbanyụọ ndokwa Tweets, Ozi na E-mail."
N'ihi gịnị? Maka dị ka BlogHer's Elisa Camahort na-ede:
Anyị achọghị ịbụ nzukọ ahụ n’atụghị egwu na-ekwu maka ọrụ aka ụmụaka, ebe ndị obodo anyị na-eche ka anyị mata ụmụaka ole merụrụ ahụ ma ọ bụ tufuo n’agha ụlọ akwụkwọ. Anyị achọghị ịbụ nzukọ na-akwalite nnukwu ihe na ngwa egwuregwu ebe obodo anyị na-echere ịnụ site na ndị enyi ha na ndị ikwu ha na marathon.
User Flickr onye ọrụ Craig Sunter
Na-agbalị ịghọta ihe ndị a Jeremaya mere, M wee gafee kwuru si Mary Bet Quirk na Ndị ahịa. Ọ na-eme isi ihe na-esonụ:
Azụmaahịa na jọgburu onwe ya, ihe omume na-akpata iwe ndụ mmadụ anaghị agakọ.
Anyị niile nwere nnukwu nsogbu. Anyị niile na-enwe mmetụta uche. Omume azụmahịa kwa ụbọchị na-adịchaghị mkpa mgbe anyị na-eme ihe dị egwu dịka iyi ọha egwu, ọdachi ndị na-emere onwe ha, ma ọ bụ ihe mberede ụlọ ọrụ.
Enwere m ike ịghọta ọchịchọ ịkwụsị ọrụ. Mgbe e gburu Onye isi ala Kennedy (na Fraịde), Chicago Tribune akụkọ na Monday, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ mechiri, ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na kọleji kwụsịkwara klaasị.
Ma n'ihe banyere ogbunigwe na ọchụchọ ndị a na-enyo enyo, enweghị m ike ịhụ ndekọ ọ bụla nke onye ọ bụla na-akwụsị ma ọ bụ na-egbu oge azụmaahịa na mpụga Boston (belụsọ maka usoro nchekwa). Onye ọ bụla gara n'ihu na-eme nyocha na mmepe, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-aga oku ahịa, na-eduzi nyocha ego, na-ede akụkọ, na-arụ ọrụ ndị ahịa, ma na-ebuga ngwaahịa.
Akụkụ ọ bụla nke azụmahịa nọgidere na-agba ọsọ ma e wezụga otu. Anyị na-azọrọ na anyị kwụsị anyị ahịa mkpọsa-karịsịa anyị elekọta mmadụ media mkpọsa ngwá ahịa — n’oge nsogbu.
Gini mere ahia jiri di iche na oru ndi ozo? Ọ bụrụ na “azụmahịa na-akpasu iwe ihe anaghị agakọ” mgbe ahụ gịnị mere na anyị agaghị egbu oge ihe nile ala? Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị na-ahụ maka ika ji eche na ha kwesịrị ịkwụsị ịrụ ọrụ mgbe ụwa lekwasịrị anya na nnukwu nsogbu? Ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị njikwa azụmaahịa, ndị njikwa njikwa yana ndị ọzọ niile ekwesighi ime otu ahụ?
User Flickr onye ọrụ khawkins04
Ndị na-ere ahịa abụghị mmadụ ma ọ bụ obere karịa mmadụ niile. Ọ bụrụ na anyị kpebie ịkwụsị ozi mgbasa ozi anyị, anyị na-ekwu ya onye ọ bụla kwesiri itinye uche na ọdachi ahụ ma obu anyi na ekwu anyị adịghị mkpa maka azụmahịa anyị.
Ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ, ịgbachi nkịtị na soshal midia na-egosi na anyị na-eche banyere obere ndị nọ na ọrụ ndị ọzọ ka na-arụ ọrụ ha kama ị payinga ntị na ihe na-eme.
Ọ bụrụ na ọ bụ nke abụọ, anyị na-ekwu na azụmaahịa ahụ adịghị mkpa dị ka nkewa ndị ọzọ na ụlọ ọrụ anyị. N'ezie, echere m na dị ka ndị na-ere ahịa anyị na-enwekarị echiche pere mpe banyere uru anyị bara. Nke a pụtara ìhè ka m na-agbalị ịkọwa okwu ahụ na ịntanetị:
@mmmmmmmmmmmmm Ọ bụ. N'oge ọdachi ọ dị mkpa ka anyị gbakọta ọnụ, ma kwụsị ya na ngosipụta mmanụ agwọ. @chukwuebuka
- Prọfesọ Tiki Ohana (@tikikitchen) April 17, 2013
Yabụ nke a, m nwere ndepụta nke omume kacha mma n’oge nsogbu mmekọrịta ọhaneze. Ikekwe ị ga-ekwenyeghi. Nke ahụ bụ ihe kwuru:
Nke mbu, soro ndi oru gi kwurita ka ha choputa na ulo oru na emechi ma obu belata oru - Ọ bụrụ na ha na-eme atụmatụ imechi n’oge, ziga ndị ọrụ ụlọ, ma ọ bụ belata ọrụ, ahịa gị kwesịrị ibelata. You ga-ahụ maka ịkọrọ ndị ọha na eze mkpebi a.
Nke abuo, nyochaa usoro ahia gi niile banyere ihe ndi nwere ike ghara inwe obi. Ngosipụta ụlọ ahịa na-ekwu na ngwaahịa gị bụ "DA BOMB" dị ka mkparị dị ka tweet na otu ọdịnaya. Nọgide na-enyocha ihe omume ka ha na-apụta ka ị wee nwee ike ime mgbanwe dịka ọ dị mkpa. Ekwela wepu ozi niile ahaziri, belụsọ na ụlọ ọrụ gị na-emechikwa azụmahịa niile.
Nke ato, nyochaa mmekorita nke ahia gi na ulo oru gi na ọdachi a. Ọ bụrụ n ’imepụta akụrụngwa egwuregwu, bọmbụ marathon nwere ike gbaa gị ume iji dochie ụfọdụ ozi nkwalite gị iji gbalịa mata banyere ọrụ ebere ị na-akwado nke ejikọtara na nsogbu ahụ. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịchọrọ ịchọta ụzọ iji nyere aka ozugbo. (Ọmụmaatụ: ihe Anheuser-Busch mere na njedebe nke Ajọ Ifufe Sandy.)
Nke anọ, kpachara anya banyere ikwu otú obi dị gị. Onye ọ bụla maara na onye ọ bụla na-eche banyere ndị ọdachi dakwasịrị ugbu a. Ọ gwụla ma ị nwere ihe ị ga-agbakwunye karịa "Obi anyị na-aga…" ị nwere ike ị gaghị ekwu ihe ọ bụla dịka ika. Ghaghi iburu Epicurious ma obu Kenneth Cole. Ọ ga-abụrịrị na ị kwesịrị ịkọwa ihe ụlọ ọrụ gị na-eme na nzaghachi ọ bụrụ na ozi ahụ metụtara ndị ahịa gị na ndị na-akwado gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-enye onyinye ego, ekwula banyere ya n'oge nsogbu. Mana ọ bụrụ na ndị ọrụ gị ga-enye ọbara, mee ka ndị mmadụ mara na a ga-egbu oge n'ịlaghachi oku na ozi ịntanetị.
Nzaghachi nsogbu gị na mmekọrịta ọhaneze na-emebi ọrụ gị. Ọ bụrụ n ’ime ihe ndị ọkachamara kwuru wee mechie ozi niile na-akpaghị aka, ị na-egosi na ndị na-ere ahịa bụ naanị ndị nwere oke ike ịkwụsị ịrụ ọrụ ma lekwasị anya na ihe dị mkpa, ma ọ bụ na ị na-egosi na ịre ahịa adịghị mkpa dị ka azụmaahịa ndị ọzọ. ọrụ. Nhọrọ abụọ ahụ gosipụtara ọrụ na-adịghị mma.
Ka anyi mee ka ahia buru nwa amaala nke izizi. Ka anyị soro ndị ọkachamara ndị ọzọ rụọ ọrụ na ọzụzụ ndị ọzọ iji meghachi omume n'ụzọ dabara adaba, mee atụmatụ nke ọma, ma kpaa agwa.
Enwere onwe gị ikwenyeghị n'okpuru.
Tags: nsogbu nsogbunkà ihe ọmụma ahịamarketing atụmatụSocial Media Marketingsoshal midia ọdachi
Mbugharị nke Logos
Ndewo Robby -
Enwere m obi ụtọ na ị na-ehota m na ibe gị, echekwara m na nyocha gị nke nsogbu ndị metụtara ịgbanwee ozi ahịa mmadụ n'otu oge nke ọdachi mba kwesịrị ekwesị.
Nke ahụ kwuru - Agaghị m ekwenye gị.
Write dee, "Ọ bụrụ na anyị kpebie ịkwụsị ozi mgbasa ozi anyị, anyị na-ekwu na onye ọ bụla kwesịrị itinye uche na ọdachi ahụ ma ọ bụ na anyị na-ekwu na anyị adịghị mkpa maka azụmaahịa anyị."
Echere m na nke ahụ bụ ụgha abụọ - ndị ahụ abụghị naanị ozi abụọ nwere ike ịkọwa site na nhọrọ iji kwụsịtụ mkpọsa ahịa akpaghị aka n'oge ọdachi.
Maka onwe m, ọ bụ mmata na n'etiti ndị na-ege m ntị, enwere ndị nwere n'ọtụtụ ọnọdụ iru uju. Ma ndị ọzọ nwere ike ghara ịna-eru uju ma ọlị. Mana n'ihi mgbagwoju anya nke mmeghachi omume mmadụ na ọdachi na ọnwụ, ọkachasị n'ọtụtụ dị ukwuu, ekwenyere m na naanị nzaghachi omume ọma bụ ịgbalị ịghara ịgbakwunye iru uju mmadụ na ozi ahịa akpaaka nwere ike bụrụ ihe ọjọọ, mkpali, ma ọ bụ na-emerụ ahụ onye na-eru uju - ọkachasị mara na enwere ezigbo ohere na ọtụtụ * ndị na-ege m ntị na-eru uju.
Ọ bụghị nke ukwuu na m kwenyere na m nwere ike iduzi ndị na-ege m ntị ebe elebara anya. Ọ bụ na enwere m olile anya na ha bụ ndị nwere ndụ zuru oke ma baa ọgaranya ebe ndị mmadụ bara uru karịa uru. Enwere m olileanya na azụmaahịa m abụghị ihe kachasị mkpa na ụwa ha, m na-ahọrọ ịkwaa ozi ahịa m dabere na ọdachi.
Maka mụ na onye otu m, mgbe anyị mechiri ozi ndị akpaghị aka anyị, anyị akwụsịghị ịkparịta ụka n'etiti ndị na-ege anyị ntị. Anyị maara na ọ dị anyị mkpa ịdị na-eji aka anyị ege ndị na-ege anyị ntị ntị. Kama ịnwa ịgbanye ozi ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọ dị mfe karịa ịkwụsịtụ usoro akpaghị aka nke "ndị na-amalite mkparịta ụka" dị ka ọdịnaya mmekọrịta mmekọrịta na-abụkarị ma biputere mmelite ole na ole sitere na ya, yana ilekwasị anya na njikọ aka dị mma. Maka anyị, nke a bụ azịza anyị họọrọ maka ihe ndị na-ege anyị ntị gosipụtara mkpa.
Mmelite mbụ anyị mgbe ogbunigwe ahụ mere bụ ihe osise dị mfe nke ndị na-agba ọsọ nwere nkọwa na-egosipụta ekpere anyị maka ndị obodo Boston na ndị ọgba ọsọ nke marathon. N'ihe karịrị elele 80,000 (karịa 20K na obere awa ole na ole), achọrọ m ịrụ ụka na ọ bụ ozi ahịa nke metụtara ndị na-ege anyị ntị n'ụzọ dabara adaba karịa ịhapụ ikwe ka ozi akpaaka anyị ga-aga n'ihu.
Maka anyị, uru nke eziokwu dị ka ika dị ezigbo mkpa, ọ bụghị naanị n'oge ọdachi, kamakwa mgbe niile. Dịka akara, ọ dị mkpa ijikọ omume anyị na onye anyị na-asị na anyị bụ, iji nkọwa nke Seth Godin nke izi ezi. Anyị bụ ndị mmadụ na-echebara ndị ahịa anyị echiche n'ezie - ọ bụghị naanị dị ka isi mmalite nke uru, mana dị ka ezigbo ndị nwere ezigbo mmetụta, ụfọdụ n'ime ha dị mgbagwoju anya n'oge ọdachi na iru uju. Authenticbụ ezigbo maka anyị gụnyere ijide n'aka na ozi ahịa anyị zara nke a n'ụzọ dị nro n'oge oge ọdachi mba na iru uju.
N'ụzọ ụfọdụ - ị nwedịrị ike ịsị na ịkwụsịtụ ozi azụmaahịa na-akpaghị aka n'oge dị otu a na-esite n'ịkwanyere ikike dị ukwuu nke ọrụ ahịa ahụ n'ọrụ, mana n'ike na-abịa ọrụ iji ya n'ụzọ amamihe.
Daalụ maka ịmalite mkparịta ụka - ọ bụ isiokwu dị oke mkpa ileghara anya, echere m.
Daalụ maka kwuru, Pauline
Ihe m na-ekwu bụ na ịkwụsị ozi akpaghị aka n’oge ọgba aghara n’ihi na “e nwere ihe ndị ka mkpa ị ga-echegbu” bụ ihe dabara adaba n’eziokwu a na anyị anaghị akwụsịtụ ihe ọ bụla azụmahịa anyị na-eme. Gini mere iji nọgide na-ere ahịa na-enweghị mmetụta karịa ịnọgide na-ere, na-aga n'ihu na-atụ anya ka ndị mmadụ rute ọrụ n'oge, ma ọ bụ na-aga n'ihu na-emeghe ọha na eze?
Anaghị m emegide ụdị niile ịbụ ezigbo. Echere m na enwere ọnọdụ nke anyị kwesịrị iji tụgharịa uche mba anyị n'akụkụ niile nke azụmaahịa gaa na ọdachi. Ọ bụ ya mere m jiri kọwaa ọnwụ Onye isi ala Kennedy.
Nchegbu m bụ na enweghị nkwekọrịta n'etiti omume nke ndị na-ere ahịa na omume nke ọzụzụ ndị ọzọ na azụmaahịa. Echere m na ekweghị na-emerụ ọrụ ahụ n'ihi na ọ nwere ike ime ka ndị na-ere ahịa yie ndị na-enweghị isi ma ọ bụ mee ka ha yie ndị gabigara oke oke.
Achọrọ m ire ahịa iji nwetakwuo nkwanye ùgwù. Mbelata ọrụ ahịa ọha na eze n'oge ọtụtụ ọzụzụ ndị ọzọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ zuru oke dị ka ọ ga-eme ka ahịa dịkwuo ike dị ka nwa amaala nke abụọ.
Aga m anọgide na-ekwenyeghi. I dee, “Achọrọ m ịre ahịa iji nwetakwuo nkwanye ùgwù. Mbelata ọrụ ahịa ọha na eze n'oge ọtụtụ ọzụzụ ndị ọzọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ zuru oke dị ka ọ ga-eme ka ahịa dịkwuo ike dị ka nwa amaala nke abụọ. ”
N'ikwu eziokwu, ekwenyere m na nke ahụ bụ eziokwu. Conductingzụ ahịa a dị ka ọrụ azụmaahịa a na-emebu n'oge ọdachi mba ga-ebelata nkwanye ùgwù maka ndị na-ere ahịa - na ọ ga-eme ka echiche ọha na eze banyere ịzụ ahịa dị ka nke a lekwasịrị anya na dollar kachasị elu na ha anaghị echebara ezigbo mkpa na mmetụta nke ndị ahịa ha echiche. . Na azụmahịa m, nzaghachi nke ndị ahịa m kwadoro echiche m. Na eziokwu - ịbụ obere azụmaahịa, anyị kwụsịrị ọrụ ndị ọzọ. Ebe m bụbu onye na-elekọta ndị ọrụ nchịkwa na ndụ gara aga, echere m na enwere ọtụtụ ọrụ azụmaahịa ndị ọzọ na-anaghị eme n'ehihie Mọnde. Enweghị m nọmba iji gosipụta ikpe ahụ n'ụzọ ọ bụla, mana onye ndu ọ bụla nwere azụmaahịa gaara enyocha ihe ndị ọrụ ya chọrọ n'oge ahụ, nke ahụ nwekwara ike ịgụnye ịhapụ ụfọdụ ndị folks ịla n'ụlọ n'oge ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Ozi dị mkpa, mana na enweghị ndị mmadụ (ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ), ozi ahụ anaghị eme.
Gịnị bụ nzube nke ahịa? Iji gosipụta uru ọ bara ma ọ bụ ịgba onye ahịa ume ime mkpebi dị mma maka ụdị ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ, mgbe ahụ n'aka, Tweet na. Ọ bụrụ na nke ikpeazụ a, echere m na ị ga-akwụsịtụ iji nweta ọsọ nke ahịa ma zaghachi n'ụzọ dabara adaba ọ nwere ike ịdị irè karị. Can nwere ike ịrụ ụka banyere ihe niile ịchọrọ maka uru ahịa dị ka ihe dịpụrụ adịpụ. Aga m arụ ụka dị ka oke mmụọ na ahịa abụghị njedebe kama ọ bụ ụzọ isi nweta njedebe. Anaghị m ahụ nke ahụ dịka enweghị nkwanye ùgwù maka ọrụ ahụ opekata mpe.
Dị ka ihe atụ - n'ụgbọ ala m, mmanụ ụgbọala bụ ụzọ iji nweta njedebe. Ana m asọpụrụ ya nke ukwuu, mana n'onwe ya, na-enweghị usoro nke ụgbọ ala, ọ naghị eme ihe ọ bụla. Ma enweghị ya, ụgbọ ala m agaghị agba ọsọ. Na-elekwasị anya na mma nke mmanụ ụgbọala m na-enweghị nlebara anya na sistemụ ndị ọzọ n'ụgbọala m agaghị eme ka ụgbọ ala m rụọ ọrụ nke ọma.
Iji m, ika na-akwụsị touting ya ngwaahịa ma na-eme ka ha, na ụlọ ahịa kọfị yinye na-akwụsị tweeting ma na-ere kọfị-ndị ahụ bụ ụdị nke m na-atụfu ụfọdụ nkwanye ùgwù. Ọ dị ka a ga - asị na ha na - azụ ahịa mgbe ọ bụla, ma chee na ha kwesiri ịgbanye olu n'oge ọdachi.
Echeghị m na ahịa bụ ihe dịpụrụ adịpụ. Echere m na ọ (kwesịrị ịbụ) nke nwere njikọ chiri anya na ọdịbendị nke ụlọ ọrụ yana mmekọrịta ya na ndị ahịa ya na ndị na-akwado ya.
Ọ bụ ya mere m ji chọọ ịhụ ụdị ahịa ka ha na-eme mkpebi ndị zuru oke, kama ịnọrọ naanị ndị ahịa ahịa. Echere m na ime nke a ga-eme ka nkwanye ugwu maka ahịa bawanye, n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ niile ga-adị n'otu ibe kama ọ ga-adị ka ọ na-ezigara ya iji bulie echiche ọha mmadụ.
Just nwere ike ịbụ onye pụrụ iche n'echiche gị, Robby! Nnukwu mkparịta ụka!
Ekwenyere m na Pauline. Ọ bụ ezie na echere m na ọ dị mkpa ịmara ihe ụdị ụdị anyị na-eme na auto-pilot (gụọ = ndokwa), n'otu oge ahụ anyị ga-echeta ịdebe ihe n'ọnọdụ.
Ọ bụghị azụmahịa niile ga-emetụta otu ụzọ na ọdachi mba. Achọghị nzaghachi ọha na eze maka ụdị ọ bụla, mana ọ dabere na azụmahịa / ahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-emepụta uwe ụmụaka ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọkụ, ị nwere ike ịnwe nzaghachi mgbasa ozi dị iche na ihe omume na Boston na ụlọ ọrụ nnabata ma ọ bụ ebe nrụzi akpaaka. N'otu aka ahụ, ebe a na-arụzi ụgbọ ala nwere ike chọọ ịlele ozi ihu ọha ha ma ọ bụrụ na ọdachi metụtara bọmbụ ụgbọ ala.
Dika nwayọ nwayọ nke ịre ahịa mgbasa ozi na mba maka akara, a na m eche na nke a bụ mkpebi amamihe. N'ezie, a ghaghị ịtụle nke ahụ na ole ahịa azụmaahịa enyere. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ m na-eme obere mgbasa ozi mgbasa ozi ugbu a, yabụ ịkwụsị ntugharị dijitalụ anyị ruo mgbe isi ihe omume nke ọdachi ga-egbu ọ bụla ịbịakwute ọha na eze anyị na-eme, ebe ọ bụ na 100% nke ozi anyị bụ emeputa na ntaneti.
Ogologo na mkpụmkpụ ya bụ na ọ bụ akara dị mma iji jee ije. N'eziokwu, onye ọchụnta ego nwere ọgụgụ isi ga-ama ihe omume amamihe dị na ya iji mee banyere ozi ha na ọha na eze n'oge nsogbu. Na mmechi, ọ bụ ọhaneze ga - ekpebi ma omume ndị ika ahụ mere dị mma.
Daalụ maka nkọwa, John.
Ọ bụ ezigbo akara iji jee ije. M na-eche banyere nkwanye ùgwù maka ọrụ ahịa karịa ka m na-ekwurịta ihe kachasị mma maka azụmahịa ụfọdụ. Echere m na azụmaahịa kwesịrị ịhazi mbọ ya. Ọ bụrụ na ha na-agbachi nkịtị n'ịntanetị, ha kwesịrị ile anya na-emechi ụzọ ha na ngalaba ndị ọzọ.
Ikwuru eziokwu na ndi mmadu ga-ekpebi ma ihe ndi ika na-eme ma obu na ha adighi nma. Ma na anyị na-ama mara na ọha na eze anaghị atụkwasị obi ụdị ukwuu iji malite.
Otu ụzọ kachasị mma iji gosipụta ntụkwasị obi bụ ịnọgidesi ike. Otu ụlọ ọrụ mechiri awa ole na ole iji nye ọbara ma melite ozi ịntanetị ha ime nke a ga-egosi agbanwe agbanwe. Otu ụlọ ọrụ na-akwụsị ahịa niile mana na-emeghe ma ọ bụghị na-egosi na ozi ha abụghị isi ihe na omenala ha.
Daalụ maka azịza Robby.
Ekwenyere m na azụmaahịa kwesịrị ịhazi mbọ ya, agbanyeghị, n'ihi na azụmaahịa na-akwụsị ịkwalite ngwaahịa ya maka oge nwere oke, ọ ga-ewedataghị ụlọ ọrụ nke ọrụ ya na mpaghara ndị ọzọ. Ọ bụrụ na m ga-akwụsịtụ ahịa n'ihi ọdachi mba, ọ pụtaghị na anaghị m enwe ndị ahịa dị ugbu a iji nwee obi ụtọ. Achọrọ m ijere ndị ahịa ahụ ozi amalitere iji nwee obi ụtọ.
Nke a nwere ike bụrụ ihe kpatara ndị ahịa anaghị atụkwasị obi n'ụdị iji bido. Echekwara m na ọ nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ mkpọsa ahịa anaghị elekwasị anya na mkpa ndị ahịa. Wayzọ m si ahụ ya, ọ bụ maka ịchọta nko mmụọ uche iji mee ka ndị ahịa jiri ego ha kewaa. Emeela m azụmaahịa m iche. Iji mee ka ndị na-azụ ahịa tụkwasị obi, ọ dị mkpa ka gị mara ha na ọkwa nke onwe gị. Momlọ ahịa ndị nne na-pop na-atụ ilu bụ ihe atụ kachasị na nke a. Ha maara otu esi emeso ndị ahịa dị ka ụmụ mmadụ, na-emegide ịhụ ha dị ka akara ngosi dollar nke na-agafere n'ọnụ ụzọ - nke ahụ bụkwa n'ikpeazụ ihe na-agwụ ndị ahịa anya mgbe ha malitere ịzụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa igbe vs. obere azụmaahịa n'okporo ámá . Kedu ihe na-eme? 'Nwatakịrị' na-apụ ahịa na ihe niile fọdụrụ bụ nnukwu ụlọ ahịa igbe ma anyị niile maara ihe nsonaazụ bụ: obere asọmpi maka nnukwu agbụ ma ha malitere ịwelite ọnụ ahịa n'ọnọdụ nke ahịa ndị ahịa ha. Ọ na-abụ maka ire ere na ịkpata ego ọ bụghị maka ijere ndị ahịa ozi.
N'ihi ya, m digress. Isi okwu a bụ maka agbanwe agbanwe na anaghị m eche na n'ihi na otu mpaghara ụlọ ọrụ nwere ike ịmetụta, nke ahụ pụtara na anyị kwesịrị ịkwụsị ọrụ azụmaahịa ndị ọzọ kpamkpam. Ahịa na-apụ apụ, mana mgbe ị nwere ọrụ dịịrị gị iji mezuo, ọ dị mkpa ịghọta na a ga-ezute ọrụ ndị ahụ.
Kwetara, John. Ọ bụ ezie na dịka onye nwe obere azụmaahịa na onye na-ahụ maka ọrụ HR, ọ dịkwa m mma ịtụle mkpa ndị ọrụ m na / ma ọ bụ ndị ọrụ ngo na oge dị otu a ma hapụ ndị ọzọ ka ha zuo ike ma ọ bụ laa n'ụlọ n'ihi ụdị ihe ahụ na-adịghị ahụkebe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịbụ. N'ezie anyị nwere ọrụ dịịrị ndị ahịa anyị. Ma - ndị kwere ka m zute ozi m niile dị m mkpa dị ka ndị ahịa m.
Prọfesọ Tiki Ohana
Ekwenyere m na okwu a.
"M na-eche na ọ nwere otutu na-eme na eziokwu na ọtụtụ ahịa mkpọsa n'ezie na-adịghị lekwasịrị anya na ọkụkụ na mkpa"
Nke a bụ ihe mere m ji were dị ukwuu nke ahịa na ụgbọ ala mmanụ mmanụ, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ịlaghachi n'oge PT Barnum. Ahịa anaghị elekwasị anya na mkpa ndị ahịa. Kama, ọ na - agwa ndị na - azụ ahịa ihe a, “You chọrọ nke a. Enweghị obi ụtọ? “Need chọrọ Brand-X!” Ọ bụ ihe ochie ochie. Okwu gbanwere, usoro ngosi na-agbanwe, mana n'ikpeazụ ozi ahụ ka bụ otu. “Nke a dị gị mkpa.” Mgbe m n'eziokwu, achọghị m nke ahụ.
Branddị nke m ga-atụkwasị obi, bụ ụdị a na-egosipụta ebumnuche na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya karịa nke ya - ha dịkwa ole na ole. Anaghị m ekwu na ụdị mkpa imechi ọ bụ ozi. Naanị belata ngwa ngwa akpaghị aka, ma nye ohere maka nchịkwa mmadụ. Otú ọ dị, dị ka i kwuru tupu mgbe ụfọdụ na ọ bụ a otutu mfe ..
Robby, ị na-ebute ọtụtụ ezigbo isi. Echeghị m na azụmaahịa kwesịrị ịbịaru nkwụsị, mana azụmaahịa kwesịrị ịma na enwere oge na ebe, yana ozi gị nwere ike sie ike site na otu ị si azaghachi ọdachi kama ịchekwa ugboro ole ahụ. Ire ahia maka ire ahịa na - egosipụtachaghị echiche, ma na - emegide ọrụ obodo. Iji mee ka ahia buru nwa amaala nke izizi, o ghaghi ikweko n'echiche nke oru na oru. Nke ahụ pụtara itinye obodo dum n'ogologo, ma kwe ka ndị mmadụ jiri aka ha chọọ gị mgbe ha chọrọ ya. Buru n'uche ihe mmadụ na-eme, ma nọrọ n'oche azụ n'okwu ndị ka mkpa.
Agbanyeghị, dịka John na Pauline, echere m na otu isi ọdịiche dị n'etiti ahịa (ọkachasị mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta) bụ na ụlọ ahịa na-emeghe emeghe mezuo mkpa, ọbụlagodi na ọ bụ naanị ebe ị ga-ezukọ.
Echere m na esemokwu m bụ na, ọkachasị site na tweets na-akpaghị aka, anyị kwesịrị ịtụle mkpa ndị ahịa. N'ihi na ọ bụrụ na anyị emeghị, ọ bụchaghị ihe ọ bụla site na mmanụ agwọ n'oge ahụ.